Posts by Everything Online | - Page 2
सेयर बजारमा सुचिकृत कम्पनीहरुले गत आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ मा गरेको नाफा कमाईको बिवरण पस्कने क्रम बुधबारबाट सुरु भएको छ । उनीहरुले अपरिस्कृत बित्तीय बिवरणहरु सार्वजनिक गर्दै गर्दा वाणिज्य बैंकहरुले कति खुद नाफा कमाए भन्ने चासो लगानीकर्तामा सर्वाधिक छ । उनीहरुको यही चासोलाई सम्बोधन गर्दै मेरो लगानी प्रस्तुत गर्दछ (२८ वाणिज्य बैंकहरुले गरेको खुद नाफा कमाईको आँकलन) २ वटा वाणिज्य बैंकको खुद नाफा ४ अर्ब माथि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कमाईका आधारमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पहिलो स्थानमा बसेको थियो । यस पटक भने वाणिज्य बैंकलाई नबिल बैंकले पछि पार्ने आँकलन गरिएको छ । उल्लेखित २ बैंकले ४ अर्ब बढी खुद नाफा कमाएका छन् । २ वाणिज्य बैंकले ४ अर्ब भन्दा बढी खुद नाफा कमाएको बित्तीय बिबरण प्रकाशनको तयारी गरिरहेका छन् । त्यसै गरी ३ अर्ब रुपैंया खुद नाफा गरेको वित्तीय विबरण प्रकाशन गर्ने तयारीमा ३ वटा वाणिज्य बैंक जुटेका छन् । २ अर्ब रुपैंया खुद नाफा गर्ने बैंकको सूचीमा ४ वटा वाणिज्य बैंक परेका छन् । कृषि बिकास बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक र नेपाल बैंक पनि ३ देखि ४ अर्बको बिचमा खुद नाफा कमाउने बैंकको… View All ….“वाणिज्य बैंकहरुले २०७४।०७५ मा कति खुद नाफा कमाए ? आँकलन सहित”
सस्तोमा किनेर महंगोमा बेच्न पाइँदैनः मन्त्री बास्कोटा काठमाडौं । सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)हरुले अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य समायोजन गर्न नमानेको र मूल्य बढाएको भन्दै तत्काल उपभोक्ताको हितमा वैज्ञानिक र व्यवस्थित नियमन थाल्ने जनाएको छ । सरकारले इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत शुल्क लगाएको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आफूखुसी मूल्य बढाएपछि उपभोक्ताले सरकारको विरोध गरिरहेका छन् । तर, सरकारले भने इन्टरनेटको मूल्य बढाइनु कालोबजारी भएको स्पष्ट पारेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले इन्टरनेटको मूल्य बृद्धिप्रति सकार गम्भीर भएको र एक साताभित्रै उपभोक्तामाथि थोपरिएको अनावश्यक मूल्य घटाइने अनलाइनखबरलाई बताए । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सरकारलाई अनावश्यक दोष लगााउँदै आफूखुसी मूल्य बढाएको मन्त्री बास्कोटाले बताए । उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्टरनेटको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ । सोहीअनुसार नेपालमा मूल्य समायोजन गर्दा उपभोक्ताले विगतमा भन्दा आधा सस्तोमा इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने हो । तर, सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेट सेवाको मूल्य घटाउनुको साटो बढाएका छन् । खरिद मूल्य घट्दै, शुल्क बढ्दै चार वर्ष अघिसम्म नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडरहरुले ५० डलरसम्म तिरेर ल्याइरहेको इन्टरनेट ब्यान्डविथ अहिले ८ देखि १० डलर प्रतिएमबीपीएस/प्रतिमहिनामा झरेको छ… View All ….“इन्टरनेटमा कालोबजारी ! सरकार भन्छ- मूल्य बढाउनेलाई कारवाही गरिन्छ”
अग्रिम आयकरले तरकारी, फलफूल र माछामासु महंगियो
२ साउन, काठमाडौं । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षबाट भन्सार विन्दुमै ५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लिन थालेपछि भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट भित्रिने तरकारी, फलफूल र माछामासु महंगिन थालेको छ । केही दिनभित्रै आयात हुने कृषिवस्तुको बजार मूल्य उच्च हुने दावी ब्यापारीहरुले गरेका छन् । साउन १ पछि भन्सार छुटेका धेरै कृषि वस्तु बजारसम्म आइसकेको छैनन् । ती वस्तु बजारमा आउनासाथ एकसाथ धेरै प्रकारका तरकारी तथा फलफूलको मूल्य ह्वात्तै बढ्ने अवस्था देखिएको हो । साउन १ गतेदेखि लागू भएको व्यवस्थाअनुसार तरकारी, फलफूल र खसीबोका, राँगा, माछा भित्र्याउँदा आयातकर्ताले ५ प्रतिशत अग्रिम आयकर तिर्नुपर्छ । यसअघि यस्तो आयकर ब्यापारीहरुले कारोबारका आधारमा किस्ता-किस्ता तिर्दै आएका थिए । तर, व्यापारीहरुले ठूलो मात्रामा वस्तु आयात गर्ने र त्यसअनुसार आयकर नबुझाएको भन्दै बजेटमार्फत अग्रिम आयकर लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । अब आयातकर्ताले विलविजकमा देखिने कारोबार ५ प्रतिशत अग्रिम आय कर भन्सारमै बुझाउनुपर्छ । कुनै कारणले आयात गरिएको बस्तुमा घाटा भए व्यापारीले त्यसको दावीसहित आय कर मिलान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यसको मारमा उपभोक्ता परेका छन् । सरकारले भन्सारमै अग्रिम अायकर लिन थालेपछि व्यापारीहरुले तरकारी, फलफूल… View All ….“अग्रिम आयकरले तरकारी, फलफूल र माछामासु महंगियो”
२ साउन, काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघले भोलि बिहीबार देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि सरकारले कुनै पहल नगरेको संघको ठहर छ । सरकारी वार्ता टोलीलाई पूर्ण अधिकार नदिई डा. केसीलाई जबरजस्ती जुम्लाबाट काठमाडौं ल्याउने परिस्थितिमात्र सजना गर्न वार्तामा बसेको हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको संघले जनाएको छ । संघले भनेको छ, सरकारले नै बनाएको विज्ञ टोलीले दिएको सुझावअनुसार चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई कार्यान्वयन गर्ने वातावरण तयार गर भन्दा समेत डा. केसीले जीवन त्याग्नु पर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो भने त्यो भन्दा दुर्भाग्य केही हुन सक्दैन ।’ चिकित्सक संघले भोलि देशभरका स्वास्थ्यसंस्थामा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्न र दिउँसो १ बजे माइतेघर मण्डलामा भेला हुने निर्णय गरेको छ । ‘एक दिने बन्दमार्फत देशभरका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको आवाज सरकारसम्म पुर्‍याउन र सरकारलाई संवेदनशील हुन सहयोग पुग्नेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।’ सरकार अझै संवेदनशील नभए देशभर आकस्मिक बाहेकका स्वास्थ्य सेवा अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि चिकित्सक संघले दिएको छ । साभारः अनलाइन… View All ….“भोलि देशभर आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने चिकित्सक संघको घोषणा”
अाेली सरकारलार्इ कस-कसले झुकाए ? ७ उदाहरण सहित
को-कोसँग झुक्यो ओली सरकार ? हेर्नुहोस् ७ उदाहरण अब झुक्ने पालो- डा. गोविन्द केसीसँग २ साउन, काठमाडौं । देशमा दुईतिहाइ बहुमतसहितको स्थिर सरकार छ । तर, केपी ओली नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार यति कमजोर देखिन थालेको छ कि सामान्य कर्मचारीले समेत उसलाई घुँडा टेकाउन र गलाउन थालेका छन् । सरकार यतिबेला सबैतिरबाट रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । शायद यही रक्षात्मक स्थितिले गर्दा नै प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा कार्यकर्तालाई भेला पारेर सरकारको प्रतिरक्षामा बोल्न र लेख्न निर्देशन दिएका हुन् । आखिर शक्तिशाली ओली सरकार अहिलेसम्म कहाँ-कहाँ झुक्यो ? हेर्नुहोस् ७ दृष्टान्तः १. कर्मचारीले झुकाए मन्त्री लालबाबु पण्डितले नेतृत्व गरेको सिंहदरबारस्थित सामान्य प्रशासन मन्त्रालय परिसरमा मंगलबार कर्मचारीहरुले घेराउ र विरोध प्रदर्शन गरे । विरोध प्रदर्शन गर्नेहरुमा अस्थायी र करारका कर्मचारीहरु थिए । त्यहाँ सवारीचालक, बगैंचे, कुचिकार र कार्यालय सहयोगीहरुको उपस्थिति थियो । अन्ततः सोही दिन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले अस्थायी कर्मचारीका नेताहरुलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर उनीहरुका माग पूरा गर्ने आश्वासन दिए । मुख्यसचिव रेग्मीको आश्वासनपछि सिंहदरबारभित्रको कर्मचारी आन्दोलन तीन महिनाका लागि रोकियो । ओली सरकारले साउन १ गते देखि सिंहदरबारलाई अस्थायी कर्मचारीमुक्त… View All ….“अाेली सरकारलार्इ कस-कसले झुकाए ? ७ उदाहरण सहित”
नहेरिकनै छामेर, सुँगेर र अन्य सेन्स लगाएरै पढ्न, रङ्ग चिन्न, फाेटाे चिन्न सक्ने बालक अविरल पाेखरेल Abiral Pokharel
असामान्य वा अदभुत अझ भनाैं दुर्लभ तथा विलक्षण प्रतिभा भएका हाेराइजन अावासिय माध्यमिक विद्यालय कपिलबस्तुमा कक्षा ६ मा पढ्ने विद्यार्थी अविरल पाेखरेल, जाे नहेरिकनै छाेएर, छामेर, सुँगेर र अन्य सेन्स लगाएरै पढ्न, रङ्ग चिन्न, फाेटाे चिन्न र अनेक गर्न सक्छन् । – Abiral Pokharel हेर्नुस् तलकाे भिडियाे —– भिडियाे साभारः सीधाकुरा जनतासँग